Iingcingo zeMeridian Tapping Points
Ukuhlanganiswa kwamaPopu okuPhatha kweMéridian. Phylameana lila Desy
I-Meridian Tapping Techniques i-"umbrella" ixesha elingasetyenziselwa kwiindlela ezininzi zokwelapha ezisekelwe kumandla kubandakanya i-Accutap, i-EFT (i-Emotional Freedom Technique), i-Pro-ER (i-Prog ER Release Release), i-EMDR (i-Eye Movement Desensitization and Reprocessing), Net ( I-Neuro Emotional Technique) kunye ne-TFT (iTreat Treatment).
Indlela iMeridian Tapping Works ngayo:
Ukulungiswa kweMetridial Tapping Techniques ukulungiswa kwezixhobo okanye ukuphazamiseka kwindlela yamandla emzimbeni eyenziwe yimvakalelo emibi. Umntu ukhetha uvakalelo oluthile olunjengomsindo, ukukhungatheka, ukuhlazeka, ukuhlambalaza, okanye ukunyaniseka ukugxila ngaphambi kokusondeza iseshoni. Ngexesha lokulandelana komntu umntu egxininisa kwimizwa yokunciphisa okanye yokucima ngelixa enza iingxelo ezilungileyo zokucima iimvakalelo ezimbi. Ukubethelwa kweengcebiso zeminwe kumanqaku ahlukeneyo kumzimba ukukhululwa kwamandla.
UGeorge Goodheart, ugqirha we-chiropractic, uyaphawula ngokuqala ukuba ukubetha i-meridians (amaphuzu e-acupuncture) kwakuncedo ekuphatheni imicimbi yenyama. Ukupakisha kwenzelwe ngamacandelo omnwe njengenye indlela yokusebenzisa iicalucucle. Isifo sengqondo sase-Australia, uJohn Diamond, senza iziqinisekiso zokuthetha ukuba zihambelanise ne-Goodheart. Udokotela wesithathu, isazi sezengqondo uDkt. Roger Callahan owaphuhlisa i-TFT yongeza isahlulo sesithathu: "ugxininise" kwiimvakalelo ezimbi zokucima.
Unceda Ukuxazulula Imiba Engokomzwelo
Iimpawu zeMeridian Tapping - iKarate Chop
I-Karote Chop Tapping Point. (c) Phylameana lila Desy
Karote Chop. Ukusebenzisa iminwe emibini okanye emithathu thintela icala elincinci lesandla phakathi kwesandla kunye nomunwe omncinci.
Ukulandelelana kweemeridiya ngokulandelelana kuqala ngeKarote Chop.
Konke ukubetha kubumnene, kodwa ngeendlela ezikhawulezayo. Sebenzisa amathiphu okanye imiphetho yeminwe yakho ukuze uthayiphe. Thepha amaxesha amathandathu ukuya kweshumi kwiqondo ngalinye leemeridiya. Ukuqala kwesi sinyathelo esithandathu sokuthinta ulandelelwano yenza "itrophu yokucoca" ezandleni zakho zombini.
Ngaphambi kokuba uqale ukuthayipha, ukhethe ukugxila kwengqalelo kwiseshoni. Khetha imvakalelo enokuthanda ukuyicima kwindawo yakho yamandla. Qinisekisa iimvakalelo ozivelayo njengoko uthayipha kulo lonke ulandelelwano lokubamba.
Imizekelo Yokugxila Kwengqondo
Ndithukuthelele umphathi wam.
Ndiyaxhala malunga nokuthatha iimviwo zam zokugqibela.
Ndiyithiyile ngenxa yokufuna iswekile.
Ndididekile ukuba andizange ndamenywe kwiqela.
Ndixhalabele ngokungabi namali.
Ndiyesaba ukuthetha koluntu.
I-Tapping Browser. (c) Phylameana lila Desy
Ingongoma yesibini imeridi kule ndlela ilandelelana yindawo ekuqala ngayo. Thepha ngokukhawuleza ezintandathu ukuya kweshumi ngokukhawuleza.
Ukukhupha i-Eye Out Socket
I-Eye Out Socket. (c) Phylameana lila Desy
Iphuzu lesithathu leemeriya kule ndlela lilandelelwe ngaphandle kweso, kodwa lingathinti iso. Thepha isango elingaphandle kweso kwinqanaba lesithandathu ukuya kweshumi.
Ukuthinta iRim Ngaphantsi kweso
Ukuthinta iRim Ngaphantsi kweso. (c) Phylameana lila Desy
Ingxelo yesine yeemeriya kule ndlela ilandelelanisa kwinqanaba elisezantsi lezandla lakho elisezantsi phantsi kweliso lakho. Thepha sixhenxe ukuya kweshumi.
Ukuthabatha umlomo ophezulu
Ukuthabatha umlomo ophezulu. (c) Phylameana lila Desy
Inqaku lesihlanu leemeridi kule ndlela ilandelelanisa kwilomo yakho ephezulu. Thepha kwiindawo eziyinyama phakathi kwempumlo yakho kunye nomlomo ophezulu. Thepha sixhenxe ukuya kweshumi.
I-Tapping yeKin Region
Ukuthinta isiChin. (c) Phylameana lila Desy
Iphuzu lesithandathu leemeridi kule ndlela ilandelelanisa kwinto yakho. Thepha kwi-indention kwi-chin yakho encinane ngaphantsi komlomo wakho ophantsi. Thepha sixhenxe ukuya kweshumi.
Ukuthinta i-Breastbone. (c) Phylameana lila Desy
Ingongoma yesixhenxe yeemeriya kule ndlela ilandelelana yakho isifuba sakho. Thepha kwindawo malunga ne intshi ngaphantsi komgca ophantsi kakhulu wekholeji yakho. Thepha sixhenxe ukuya kweshumi.
Ukuthabatha izibilini zangaphakathi
Ukuthabatha izibilini zangaphakathi. (c) Phylameana lila Desy
Kukho amanqaku amaninzi eemeridi ezikulo ndawo. Thabathe ngobumnene zombini izibilini zakho zangaphakathi kunye ngamaxesha amaninzi. Ukongezelela, ungaphinda uphononise iintsimbi zakho zangaphandle kunye.
Ukuphepha ngaphantsi kweArms
Ukuphepha ngaphantsi kweArms. (c) Phylameana lila Desy
Ingongoma yesithoba yesigxina kule ndlela ilandelelana ingaphantsi kweengalo zakho zeengalo. Eli nqanaba liphantse kumgangatho weengono okanye ezintathu intshi enye ngaphantsi komgodi wakho wengalo. Mva kancinci uze ufumane indawo encinci yethenda kule ndawo yomzimba wakho. Thepha le ndawo sixhenxe ukuya kweshumi.
Ukuthabatha iNqununu yeNtloko
Ukuthabatha iNqununu yeNtloko. (c) Phylameana lila Desy
Ingongoma yeshumi yeemeridi kule ndlela ilandelelana yithsaba yentloko yakho. Kukho ngokwenene amanqaku amaninzi kwisithsaba, ngoko vumela ukuba zakho zifake umnqweno kwisindululo esisetyhula ngaphezulu kwesicatshulwa sakho sekhanda! Emva kokuba uqedile ukuthabatha onke amanyathelo ayishumi uthathe umzuzwana ukuba uhlolisise kwakhona isimo sakho sengqondo. Ukuba usalokhu ukhululekile okanye ulungelelanisa ngokukhawuleza, phinda ulandelelwano oluphindwe kabini ukuya kwimihla emine ukuya kwintshukumo yakho yovakalelo ilula okanye iphelele.
Iindlela ezininzi zokuphulukisa iiHands
Ukusetyenziswa Kwezandla njengezixhobo Zokuphilisa
Iingxelo: Pat Carrington, meridiantappingtimes.com, meridiantappingtechniques.com
MGMT - IProfayili yoMculi
Umda we-Lebanese Civil War, ngo-1975-1990
Ukungabi nabulungisa kwexesha elidlulileyo nelikhoyo kwilizwe lamaNdiya
Ukudibanisa isiFrentshi '-re' isenzi 'Défendre' ('Ukukhusela, Ukuthintela')
Imfazwe yaseVietnam: IGulf of Tonkin